Uchwepheshe we-Semalt Uveza Amathiphu Ngendlela Ongayikhiphela I-Bot Traffic Kusuka ku-Google Analytics yakho
I-Bot traffic, i-traffic yangaphakathi, nokuphepha kwe-cyber zibhekwe njengezingqinamba ezihamba phambili emhlabeni jikelele wokumaketha kwedijithali . Ukubaluleka kokugcina izibalo zakho ze-Google Analytics kunembile ngeke kugcizelelwe kahle. Iphrezentheshini yemibiko ye-Google Analytics itjela kabanzi mayelana nezinqumo zakho namakhono wokumaketha oku-intanethi. I-Google Analytics idlala indima ebalulekile ekusizeni abathengisi ukuthi baqonde futhi bahlaziye izimoto eziqhutshwa ezindaweni zabo.
I-Bot traffic ingenye yemithombo ebaluleke kunazo zonke futhi engaba khona ekubambeni idatha engalungile.
U-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uncoma ngaphandle kwe-bot nomgwaqo wangaphakathi kusuka kusayithi lakho ezokwenza ngcono ukusebenza kwayo.
Okudingayo Ukuze Ukwazi Nge-Bot Traffic
Abakwa-Crawlers, i-bots, kanye neziphequluli zisebenza ngokuzenzakalelayo eziqedela imisebenzi kuma-platforms e-intanethi ngaphandle kokulawulwa. Izibalo zinezici zokuthi ukulawula ukuhamba kwezithuthi kudlula ingxenye yesigamu esakhiwe kumapulatifomu. Ngokusho kochwepheshe be-IT, i-bot traffic ikhula ngesilinganiso esiphezulu kakhulu, lapho kukhishwa khona izimoto ezenziwe ngabantu.
Ukuphakama kwe-bot traffic, i-malware, ne-Trojan virus kusho ukuthi kungani kuyadingeka ukukhipha nokulawula ukuhamba kwe-bot in idatha yakho ye-Google Analytics kanye nemibiko. Yiba nesifiso lapho ufunda futhi uhumusha imibiko..Ukungalungi kahle kungashintsha impumelelo yakho ekuqondiseni okungalungile.
Indlela Yokuthola I-Bot Traffic Kusuka Kudatha Yakho
Olunye uhlobo lwe-bots, ama-bots omnyama, lufaka ingozi enkulu kumkhankaso wakho. Ama-bad bots avakashela iwebhusayithi yakho ngenhloso yokungenisa igciwane le-trojan, i-malware, ukufaka okuqukethwe kwakho, nokugaxekile. I-Bad bots ibonakala ngokulingisa, lapho beyilingisa ukuziphatha kwabantu okwenze kube nzima ukuhlukanisa i-bots nezivakashi ezisemthethweni.
Ukususwa Kwe-Bot Traffic Kusukela ku-Google Analytics
Vakashela umqondisi Buka izilungiselelo bese uchofoze 'Hlanganisa wonke ama-hits ezikhethiwe ezigciniwe kanye nebhodi'.
Hlola ithrafikhi esolisayo futhi usebenzise igama lomsingeli elivumelekile ukukhipha ithrafikhi ehlonziwe.
Vula inketho yePropati, chofoza inkinobho ethi 'Ulwazi lokulandelela', bese uhlola 'Uhlu lokuKhipha ukuKhipha'.
Le ndlela isebenza ukukhipha ibhugi elisola futhi elitholiwe kusuka kumbiko wakho. Le ndlela isebenza kumawebhusayithi amancane nezinkulu. Ukungaxhunyiwe wonke ama-bot ama-spiders awaziwayo nokusebenza kahle ukusebenza ngenombolo enhle. Ukuhlanza umbiko wakho we-Google Analytics kwenza abanikazi bebhizinisi benze izinqumo ezibucayi mayelana nenhlalakahle yamabhizinisi abo. Cabanga ngamasu okusebenzisa okuzovimbela imizamo yokuhlukumeza, i-malware, ne-virus ye-trojan engathinti iwebhusayithi yakho. I-DataDome, inkampani e-IT ephezulu ephezulu ihlangene nabanikazi bebhizinisi. Le nkampani inikeza izixazululo ze-bot traffic ngokulawula uhlobo lwebhodi oluvakashela isayithi lakho. Amathiphu aqanjiwe ngenhla azokusiza ukuba ufinyelele idatha ehlanzekile neyinkimbinkimbi ye-Google Analytics.